Ogaden News Agency (ONA) – Trump oo Joojiyay Taageeradii Ay Siin Jireen Mucaaradka Suuriya.
Trump oo Joojiyay Taageeradii Ay Siin Jireen Mucaaradka Suuriya.
Posted by ONA Admin	/ July 21, 2017
Xukuumada Maraykanka ayaa la sheegay inay joojinayso taageeradii ay siin jireen xoogaga hubeysan ee mucaaridka la dagaalamaya hogaamiyaha Suuriya Bashar Al-Assad.
Warbixintan laga soo xigtay Saraakiisha Sirdoonka ee dalka Maraykanka ayaa shalay lagu daabacday jariirada Washington Post, go’aankan ayaa la sheegay inuu qeyb ka yahay dadaalka uu Trump ugu jiro inuu xidhiidh fiican la yeesho dowlada Ruushka oo iyadu taageerta Dowlada Suuriya ee Bashar Al-Assad.
Go’aankan ayey xukuumada Trump qaadatay bishii lasoo dhaafay sida lagu sheegay warbixintan. Maraykanka ayaa sanadkii 2013 bilaabay mashruuc ay fulineysay Hay’ada Sirdoonkooda ee CIA oo tababaro iyo hub siin jiray xoogaga mucaaridka sunnida ah ee la dagaalamaya xukuumada Al-Assad.
Mr. Trump ayaa tilaabadan qaaday kahor shirkii G20 ee 7-dii bishan ka dhacay magaalada Hamburg ee dalka Germany, halkaasi oo uu kulankiisii ugu horeeyey oo rasmi ah kula yeeshay Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin.